Ahoana ny fomba hamerenana sy hamerenana ny karatra SD ho an'ny Raspberry Pi? | Avy amin'ny Linux
Ahoana ny fomba hamerenana sy hamerenana ny karatra SD ho an'ny Raspberry Pi?
Taorian'ny nandraketana tamim-pahombiazana ny rafitra sasany ho an'ny Raspberry Pi amin'ny karatra SD anay sys saika azo antoka fa hanohy hanao fitsapana vitsivitsy isika ny rafitra vaovao, ary koa ny fanaingoana fanaingoana ao.
Saingy zavatra Ny azoko antoka dia ny hoe tsy maintsy nandalo an'ity dingana ity mihoatra ny indray mandeha ianao, ho an'ny zava-misy tsotra fa misy rafitra maro ho an'ity fitaovana ity, dia nataonao ho fizahan-toetra azy ireo ny mahita hoe iza amin'ireo no mifanaraka amin'ny ilainao.
Ity dingana ity dia mety hahatonga anao hamoy ny fanahafana sasany amin'ny rafitra iray izay nampiasanao taloha ary raha very azy ireo ianao dia hanenina avy eo rehefa nanao ilay fanovana.
Mba hisorohana an'ity karazana nenina ity dia afaka manao backup fisorohana ny karatra SD-tsika isika ary afaka mamonjy ireo rafitra sy fikirakirana heverinay fa mety.
Ary tsy izany ihany, tsy maintsy dinihintsika ihany koa fa ny karatra SD dia mazàna manana fotoam-piainana iray, noho izany dia tsy dia maika loatra loatra ny fanatanterahana backup fisorohana.
Ka raha mieritreritra ianao fa izao ny fotoana tokony hamerenanao ny karatra SD, dia manasa anao aho hanaraka ireto torolalana manaraka ireto.
Una amin'ireo fomba mora indrindra hanaovana backup ny fampahalalana voarakitra ao anatin'ny karatra SD anay dia ny fanaovana ny kopian'ny atiny rehetra.
Inona andao atao miaraka amin'izany ny mamorona sarin'ny karatra SD izay azontsika atao tahiry mba hahafahantsika manatanteraka ny famerenana amin'ny laoniny.
Ka hanatanterahana an'io asa io dia ilaina ny manaisotra ny karatra SD amin'ny Raspberry Pi, izay tsy maintsy esorintsika amin'ny fahefana.
1 Ahoana ny fomba fanamboarana backup ny karatra SD anay?
2 Ahoana ny famerenana amin'ny laoniny ny backup an'ny SD?
Ahoana ny fomba fanamboarana backup ny karatra SD anay?
ankehitriny tsy maintsy ataontsika ao amin'ny solo-saintsika ao amin'ny mpamaky karatra ny karatra ataontsika na miaraka amin'ny fanampian'ny adaptatera.
Vita ity tsy maintsy manokatra terminal izahay ary manatanteraka ity baiko manaraka ity hahafantarana ny teboka an-tendrombohitra izay ananan'ny SD.
Miaraka amin'ity baiko ity ho hitantsika ny teboka tendrombohitra, ary koa ny fizarazaran'ireo karatra misy anay.
Saika amin'ny alàlan'ny default dia matetika no teboka an-tampon'ny / dev / sdb na / dev / sdc na dia manana fitaovana fitahirizana bebe kokoa aza ianao, dia mety hiovaova io toerana io.
Raha ny amiko dia / Dev / sdb, andao tsy hiraharaha ireo fizarazarana / sdb / sdb1, sbd2, sdb3 sns. Tsy mahaliana antsika ireo.
ankehitriny amin'ny terminal isika dia hanatanteraka ity baiko manaraka ity
Ho hitanao fa ny baiko dia mitovy amin'ilay ampiasaintsika handoroana ireo sary kapila, ao aminy ihany no manova ny teboka sy ny lalan'ny masontsivana.
Ho an'ireo tranga ireo mpampiasa Windows, azon'izy ireo ampiasaina ny fitaovana mitovy izay nanolorana azy ho firaketana ireo sary Win32DiskImager.
eto ny fomba hanaovana izany dia misafidy ny kisary fampirimana, toy ny hoe hahita ilay sary kapila isika, fa eto kosa hamorona ny anaran'ny sarinay izahay.
Azontsika atao ny mametraka ny tenantsika ao anaty fampirimana ahafahantsika mitahiry ny sary nomaniny ho solon'izay SD
Ankehitriny dia hisafidy ny làlan'ny karatra SD isika.
Ary ho hitantsika fa ny bokotra tokana alefa dia ny "Vakio" izay hoterenay hanombohana ny fizotrany hamerenana ny karatra SD anay.
Amin'ny faran'ny dingana azontsika atao ny manamarina fa ilay sary dia eo amin'ilay lalana atoro anay.
Ahoana ny famerenana amin'ny laoniny ny backup an'ny SD?
Ny teboka iray manan-danja dia ny tokony hahafantaranao fa ity backup ity dia azo soratana ao anaty karatra SD manana fahaiza-manao mitovy ihany, ary tsy ho latsa-danja mihitsy.
Tsy nanandrana tamin'ny karatra ambony kalitao aho, fa amin'ny ankapobeny io fizotran-javatra io dia mety hiteraka fifandonana, satria ny fizarazarana sy ny sehatra dia dika mitovy.
SRaha manana karatra SD hafa ianao na te hamerina amin'ny laoniny ny nomaniny ho solon'izay noforoninao Azonao atao izany amin'ny alàlan'ny fanarahana ireo torolàlana izay arahinao hanoratana rafitra iray ao amin'ny karatra SD-n'ny fitaovanao.
Ka ny fizotrany dia mitovy ary raha manana karatra SD manana fahaiza-manao mitovy ianao dia afaka manao ny fitsapana eo amboniny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » Ahoana ny fomba hamerenana sy hamerenana ny karatra SD ho an'ny Raspberry Pi?
Danie H dia hoy izy:
ry namako, raha te hanao backup avy amin'ny windows an'ny micro sd memory rehetra misy partitions ianao, ahoana no hatao? salama!
Valio amin'i Danie H
Navoaka ny kinova vaovaon'ny mpanoratra sary Krita 4.1.0
Ny KDE Plasma 5.13.2 dia eto miaraka amin'ny fanatsarana sy fanamboarana 20 mahery